dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်ကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Hypocretin / Orexin စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း hypocretin အဲဒီ receptor 1 (2015) ကအဓိကအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ACS Chem neuroscience ။ 2015 ဇန်နဝါရီ 21;6(1): 138-46 ။ Doi: 10.1021 / cn500246j ။ EPub 2014 ဒီဇင်ဘာ 11 ။
မင်းသား CD ကို1, Rau AR, Yorgason JT, Espana RA.
ကျယ်ပြန့်အထောက်အထား hypocretins / orexins hypocretin အဲဒီ receptor မှာလုပ်ရပ်များကနေတဆင့်ပြကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့် dopamine သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြု 1.
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် hypocretin အဲဒီ receptor2များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ hypocretin အဲဒီ receptor2အလွဲသုံးစားမှုအချို့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအခြို့သောသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်ထို့ကြောင့်ကြောင့်လက်ရှိမသိရသေးသောအရာကိုအတိုင်းအတာ hypocretin အဲဒီ receptor2အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောအားထုတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်, dopamine အချက်ပြသို့မဟုတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှကျနော်တို့ hypocretin အဲဒီ receptor 1 ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် / သို့မဟုတ် dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်အပေါ် hypocretin အဲဒီ receptor2ပိတ်ဆို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နျူကလိယအတွက် dopamine အချက်ပြအပေါ် hypocretin ရန်များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အစာရှောင်ခြင်းစကင်ကိုသိသိ voltammetry ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဤအကြောင်းရန်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ core နဲ့တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယား accumbens အတွက် Vivo ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များ hypocretin အဲဒီ receptor 1 ဖြစ်စေသို့မဟုတ် hypocretin အဲဒီ receptor 1 နှင့်2နှစ်ဦးစလုံး၏ပိတ်ဆို့သိသိသာသာ dopamine အချက်ပြအပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ကင်းယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့ကျစေသည်။ သရုပ်ပြ ဆနျ့ကငျြတစ်ယောက်တည်း hypocretin အဲဒီ receptor2၏ပိတ်ဆို့ dopamine အချက်ပြသို့မဟုတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် hypocretin အဲဒီ receptor 1 dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် hypocretin အဲဒီ receptor2ထက်ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်အတူနှစ်ခု hypocretin receptors တစ် differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု, အကြံပြုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိစာပေနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲဒီဒေတာ hypocretin အဲဒီ receptor 1 အပေါ်ဦးစားပေးလုပ်ရပ်များကနေတဆင့် dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအလိုလိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထု hypocretins သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။